03 Decemeber – Maalinta Caalamiga ee Naafada. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / 03 Decemeber – Maalinta Caalamiga ee Naafada.
Posted by: radio himilo December 3, 2017
Muqdisho – Xuska sanadlaha ah ee Maalinta Caalamiga ee Naafada waxaa sanadkii 1992-kii asteysay QM. Ujeedku waa ilaalinta xuquuqda iyo bad-qabsanaanta dadka laxaadkoodu kala dhiman yahay ee ku jira dhammaan bulshooyinka iyo in sare loo dhigo wacyiga la xiriira xaaladaha ay ku nool yihiin dhan walba – siyaad ahaan, dhaqan ahaan iyo bulsho ahaan.
Dadka naafada waxay kamid yahay qeybaha aadka ugu nuglaada caqabadaha nolosha. Dadka qaba baahiyaha gaarka ah waxay leeyihiin hannaan caafimaad oo liita: horumar hooseeya oo dhinaca tacliinta ah: ka qeyb-gal yari dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo heer aad u sarreeya oo faqri ah oo ay ku sugan yihiin.
Tiro ka badan hal bilyan oo qofood ayaa la nool nuucyada kala duwan ee naafanimada ama 15% dadweynaha caalamka. Tiro u dhaxaysa 110-190 milyan oo da’da weyn ah ayay ku adag tahay inay howl-galaan. Heerka naafanimadu wuu sii korayaa iyada oo loo celiyo da’da ku socta iyo yaraanta adeeg caafimaad oo halhaleel ah.
Dadka qaba baahiyaha gaarka ah aalaaba mahelaan daryeelkii caafimaad oo ay u baahnaayeen. Carruurta naafada ah waxay u badan tahay inaysan xaadirin iskuullada sida carruurta kale. Nasiib-darro, naafadu waxay sidoo kale u badan tahay inaysan helin shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda si lamid ah kuwa kale oo aan naafada ahayn. Waxaana run qaraar ah in naafadu ay aad ugu nugul yihiin faqriga iyo macluusha.
Dalal badan waxaa ka jira adeeg caawimaad oo aad u kooban. Xog laga ururiyay dalalka koofur Afrika waxaa lagu sheegay in kaliya 26-55% naafada ku nool ay helaan daryeelkii ay u baahnaayeen. Halka 17-37% ay helaan qalabka kaalmaatiga sida kursiga lagu socdo, biraha lagu boodo iyo wixii lamid ah.
Waxaase jirta xaqiiq aan la wada qirsaneyn oo ah in dadka naafada ah ay u noolaan karaan sida dadka kale: qeybna uga qaadan karaan horumarinta bulshooyinka ay ku dhex nool yihiin.
Ilaa iyo hadda, Cahdiga Xuquuqda Naafada waxaa saxiixay in ka badan 170 dal. Halka 130 dal oo kale ay rumeysan yihiin hir-gelinta iyo ku dhaqanka Cahdiga.
Balse taasi ma ahan mid si guud iyo halhaleel ay uga jawaabi karaan dowlado badan siiba qaaradda Afrika. Halka la is-weydiinayo haddii Naafada adduunka loo heli karo xuquuq dhameystiran oo ay, sida dadka kale, raaxo ugu noolaan karaan dhulkooda, haddana naafo kasta ma ahan mid qeyla-dhaantaas qeyb ka ah. Dalal badan, sida Japan, dadka naafadu waxay goor hore ku raaxaysteen isku filnaansho u suura-gelisay in – tusaale ahaan kuwa araga la’ ay kaalmo la’aan ku safraan meel walba oo dalka kamid ah. Jid ama laami kasta waxaa loo sameeyey waddooyin gaar u ah dadka araga la’.
Previous: Ciyaartoyda Manchester United ee ka qeyb-gali doona koobka Adduunka.
Next: Ciyaartoyda hoggaaminaya gool-dhalinta horyaalka PL 2017-2018.